Magirazi ezuva echikadzi Akadzora SoMa Marasha / Nhema - Hanukeii
CHII ICHOCHI HANUKEII?
HUPENYU STYLE BLOG
Ngoro yako haina chinhu
Enderera pakutenga →
Previo | Zvadaro
SoMa Makara / Nhema
Miwani Hanukeii® Izvo zvakagadzirwa neazvino, zvemahara uye zvine shungu vakadzi. Vanguard, kuwirirana uye rusununguko #BAREFOOTLIFE
Nyowani uye yazvino furemu yeavant-garde vakadzi
Tsanangudzo Yakakwirira Yakadzvanywa TAC Lenses
CAT.3 - UV400 kuchengetedza
Chimiro chakagadzirwa nehupamhi hwekureruka polycarbonate.
Microfiber kesi inosanganisirwa neayo iwe yaunogona kuchengeta magirazi ako uye zvakare kuchenesa lens
Chimiro, runako, zvakasikwa, aesthetics, zvemazuva ano, avant-garde ... Vakadzi vezana ramakumi maviri nemakumi maviri vanotsika nechivimbo. Kuva mukadzi kwakafanana nekushinga. Kuva mukadzi akabudirira kwakafanana nekurwira kuburikidza nematete uye matete. Kuva mukadzi hakuna nani kana kushatisa pane kuve murume, chinongova chimwe chinhu chakasiyana icho zvakare chinoshamisa uye chakakosha. Icho chakakwana chinowanisa kusimba kwechisiko: kuwirirana, kunzwisisika, kubata, ruzivo, kureruka uye kuomarara panguva imwe chete.
En Hanukeii isu takaenderana nezvinodiwa nemukadzi wanhasi. Isu tinogadzira zvigadzirwa zvevakadzi vemazuva ano vanoziva zvavanoda uye kuti vanozvida sei uye zvakare, tinovapa poindi yehupenyu uye kunakidzwa.
Tinoda kurarama takadzikama uye pamusoro pezvose, tinoda kunakidzwa nehupenyu murunyararo. #barefootlife
Aya magirazi ezuva akagadzirwa nemalensi anopenyerwa anokwanisa kudzivirira zvakajeka zuva rakapenya uyezve kupenya uye kuratidzira kunogadzirwa nekuburitsa kwavo nzvimbo dzakatsetseka senzira yemugwagwa, mvura yegungwa, nezvimwe. Nekudaro kuzadzikisa kuona kwakapfava uye kwakanyanya kugadzikana pamwe nekugadzira zvakare rakasarudzika ruvara uye musiyano.
Ivo vane UV400 dziviriro muchikamu chechitatu, ichivaita sarudzo yakasarudzika yekudzidzira mvura uye mitambo yechando, pamwe nekuve wakanakira kushandiswa kwezuva nezuva uye yakakodzera kutyaira.
Magirazi emeso Tsanangudzo Yakakwira FULL HD TAC Izvo zvakagadzirwa nezvinhu izvo zvinopa musiyano wepamusoro uye kupinza.
Maawa makumi maviri nemana mairi Maodzanyemba Emusika, nharaunda yekufungidzira yeguta reSan Francisco, muCalifornia, zvaive zvakakwana kuti isu titore kurudziro yese yataida uye kubhabhatidza muunganidzwa wedu wemagirazi ezuva ane zita rakakurumbira rinopa nzvimbo ino yeAmerica zita rayo: SOMA.
Munguva yekugara kwedu muSan Francisco, takakwanisa kuona kuti hupenyu imomo hunopfuura nekumhanya, kuti vanhu vanofamba nekukurumidza, nekuchimbidza, vasingazive chaizvo kwavari kuenda uye vasina kunyatso tarisa kune zvakapoteredza.
Ichokwadi kuti kukura kwezvivakwa, kuenderera kunopihwa mamiziyamu kana huwandu hwemaresitorendi ekurota anotonga nharaunda, zvinogona kuita kuti chiitiko chinyanye kukuvadza; Zvisinei, isu tinotarisa pakunakidzwa nekukoshesa vadiki, uye zvishoma zvinhu zvaiita kunge zvinofamba zvishoma nezvishoma mumigwagwa yeguta iri risingagumi; Ndiwo kupokana kunoramba kuripo kunopa SOMA hunhu hwayo, nharaunda umo zvese zvinoita senge zvemuchina uye tekinoroji, iyo, kana tavhura kona, inopa gadheni rine labyrinths, rine maruva akajeka uye ari kutumbuka.
Mukugadzira yedu yekuunganidza SOMA, isu takabhadhara mutero kuSouth Of Market nekugadzira modhi yeXL vhezheni yegirazi, inowirirana nehukuru hwenzvimbo yeCalifornian. Isu takatama zvishoma kubva pakudzikama kwatinonzwa pamhenderekedzo yegungwa uye mujecha, kubva pane pfungwa yerusununguko inonzwisiswa sedanho risina chinhu rakamirira kurarama, uye isu takanangana nemaitiro emugwagwa, pahupenyu hwehunhu uye nevanhu , ndiani anogona zvakare kutipa pfungwa yekusununguka nguva nenguva nekunzwa sekunge tisingazivikanwe mumhomho uye tinogona kuva chero watinoda patinoda.
Kana paine mafaro hapana kunetseka. Hanukeii rinopfuura izwi chete, ndiwo mararamire, manzwiro, nzira yekuve. Isu tiri chizvarwa chevasikana vanonzwisisa kukosha kwekusiya zvinonetsa kumashure uye kurarama iyo nguva takasvinura ... Tinonzwisisa kuti zvinobatsira sei kubvisa shangu dzako, kufamba usina shangu uye kukanganwa kushushikana kwako kuzvinyudza mune mikuru mikuru iyo hupenyu inofanirwa kupa, kuratidza yakanaka uye fashoni nguva dzese.
Hapana miganho inobvumidzwa kana iwe uchigara a #BAREFOOTLIFE.
Laguna Bi-Magenta / Nhema
Laguna Bi-Magenta / Nhema 44.95 €
Laguna Nhema / Nhema
Laguna Nhema / Nhema 44.95 €
Laguna Kamba / Nhema
Laguna Kamba / Nhema 44.95 €
SoMa Nhema / Nhema
SoMa Nhema / Nhema 44.95 €
SoMa Camel / Bhuruu
SoMa Camel / Bhuruu 44.95 €
Southcal Nhema / Nhema
Southcal Nhema / Nhema 44.95 €
Southcal Girini / Dema
Southcal Girini / Dema 44.95 €
Maodzanyemba Akatsvuka / Nhema
Maodzanyemba Akatsvuka / Nhema 44.95 €
Terms uye Mamiriro
© 2021 Hanukeii. ® Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa